Nzira dzekuwana dzinodhura magetsi wheelchair | Karman® Mawiricheya
Kuwana mari ye wiricheya inogona kuva nzira inovhiringidza; zvisinei, iyo US inopa dzakasiyana siyana zvirongwa zvemari. Kuwana simba rinodhura wiricheya zvinogona kuve zvinonyengera asi isu tichaongorora nzira shoma mukati mese zvakare zvinopa zvinodikanwa ruzivo. Usati watenga a wiricheya, taura nachiremba wako kuti akubatsire kusarudza kuti chii mhando of wiricheya zvakanaka.
A wheelchair yakajairwa inodhura madhora mazana mashanu. Nepo chigaro chezuva nezuva chichigona mutengo 1,000-2,000 zvinoenderana ne zvinhu chechigaro kubva pakukochekera, mavhiri, uye furemu. Mawiricheya emagetsi, kune rimwe divi, zvinosiyana zvakanyanya. Paavhareji, iyo mutengo anenge 7,000 uye inogona kuva priced kusvika pamakumi matatu ezviuru.
Inishuwarenzi ndeimwe nzira yekuwana inodhura wiricheya yemagetsi, asi zvinogona kuva zvakaoma. Kazhinji, inishuwarenzi inovhara inogona kuvhara chero pakati pe50-80% yeiyo mutengo. Nekudaro, chiremba anodiwa kuti atumire pamusoro pezvakakodzera magwaro kuinishuwarenzi yako Provider. Kuchengetedza kufukidzwa uku, kubva kuinishuwarenzi kana chirongwa chehurumende senge Medicare, kazhinji inoda kushanyira-munhu nachiremba wako vasati vatumire chero magwaro anodiwa. Kana iwe ukatenderwa, yako copay inoenderana ne mhando yezvirongwa iwe unogona kunyoreswa kuburikidza neinishuwarenzi yako.
Kazhinji, izvo zvinodiwa kuti uwane kukodzera wiricheya zvemari rubatsiro runosanganisira zvishoma kufamba uye hutano mamiriro izvo zvinokonzeresa kuoma kukuru kufamba. Mumwe anenge asingakwanise kuita zviitiko zvezuva nezuva mukati meimba. Uye, munhu anogona kushanda zvakachengeteka a wiricheya kana ndichave nerubatsiro rwakavimbika.
Kune zvakare zvirongwa uye masangano anopa mhuri dzinotambira mari mahara kana yakaderedzwa-mutengo mavhiripu. Ivo zvakare kupa rubatsiro kune vanhu avo kuda a wiricheya nekuda kwechimwe chirwere; saka, anofanira munhu inoda an wiricheya yemagetsi ivo vanogona kunge vachikwanisa kuburikidza nenzira iyi.
Heino pfupiso pfupiso yemamwe emapurogiramu nemasangano:
Medicare Chikamu B:
Ichi chirongwa chichafukidza ruzhinji rwe wiricheya yemagetsi inotevera kubvunza kwachiremba. Murwere anoda kusangana nezvinodiwa kuti akwanise.
Kana murwere achikodzera, Medicaid inogona kuvhara wiricheya uye pamwe chero mutengo uri zvakasara izvo Medicaid haina kuvhara.
Shamwari iyi icha zvinopa vakasununguka mavhiripu uye zvikamu. Nekudaro, ivo vanongogovera muMadganis, Virginia, uye Washington DC.
Iyo purogiramu ichatora mavhiripu kwete parizvino iri kushandiswa uye ichivapa kune vanhu vanoshaya mukati meUS.
Kutsvaga mari ye wiricheya, kazhinji, zvinogona kuvhiringidza. Nekudaro, kune zvakawanda zviwanikwa zvinogona kukubatsira iwe kuti uwane chinodhura cheya cheya. Zvinongotora kumwe kuongorora.
Heino ruzivo nezvemari mune zvese.